Na-eme ihe ka ukwuu n'ime ego gị | Martech Zone
Tọzdee, Machị 20, 2008 Wenezdee, Jenụwarị 4, 2017 Douglas Karr
Monetization nke a blog siri ike ọ gwụla ma ị nwere ọtụtụ okporo ụzọ ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere nnukwu niche. M na-agba ọsọ na teknụzụ mgbasa ozi dị iche iche na saịtị m ma nwee mmasị na ego m nwetara. Otu n'ime nsogbu na ịgba mgbasa ozi na-enweta ọtụtụ ihe na ezigbo ụlọ. You na-agba mgbasa ozi ngosi? Ọkọlọtọ? Bọtịnụ? Njikọ ederede?
Ekwenyere m na nke a bụ echiche dị n'azụ mgbalị ọhụrụ dịka Ọrụ Rubicon (nke emeela ka ego m ritere na ịkwụ ụgwọ-kwa-pịa mgbasa ozi atọ na blọọgụ m). Usoro ha na-enyocha arụmọrụ na mgbasa ozi ma na-agbanwe mgbasa ozi gosipụtara ebe ahụ.
Rịba ama ebe m kpebiri 'igwu egwu' ma kwuo echiche nke m… adịghị mma:
Ọgbọ ọzọ nke ego
Ọzọ na weebụ bụ ngwa ga-enyere ma onye mbipụta akwụkwọ ma onye mgbasa ozi aka ịchịkwa njikwa. AkukoWeb, a na-eduga na contextural mgbasa ozi ụlọ ọrụ mara ọkwa ụnyaahụ na ha na-launching ADSDAQ Exchange Agency Trading Desk. A bụ ihe a blurb si ha Press Release:
Genlọ ọrụ na-eche nsogbu ndị metụtara ịma aka nke usoro mgbasa ozi nke ọma na ịnweta nghọta bara uru n'oge oge nke ndị na-ege ntị. Ha ga-eji ADSDAQ Exchange Agency Trading Desk iji jikọta arụmọrụ na gburugburu n'ofe mgbasa ozi mgbasa ozi dijitalụ niile. N'iji otu ezigbo oge eji eme ihe na-eme ka azụmahịa nke ụlọ ọrụ ahụ nwee ike, ụlọ ọrụ dijitalụ nwere ike iji ADSDAQ Exchange Agency Trading Desk gafee ịzụta na ọnụ ụzọ, mgbasa ozi mgbasa ozi na saịtị na-azụta ihe iji kwusi zụta n'ime ọdịnaya ọdịnaya ma jikọta arụmọrụ mkpọsa na edemede ndị ahụ. . Ọrụ ahụ na-arụ ọrụ iche na azụmaahịa ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke ụlọ ọrụ.
Ozugbo onye zụrụ ahịa ma ọ bụ onye nyocha natara nyocha a, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike? Site na ịpị bọtịnụ? Zụta ọtụtụ ngwa ahịa nke na-arụ ọrụ maka mkpọsa enyere ma ree ngwaahịa ọ bụla na-emezughị atụmanya ha.
Na ADSDAQ (etinyere na blọọgụ m ugbu a), enwere m ike ịtọ ọnụahịa pere mpe maka ụlọ m MA nye ndị mgbasa ozi ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ọ nweghị onye kpebiri ịzụta. Lee nnukwu echiche!
N'aka ozo, oburu na m kwuputa aka ekpe aka ekpe ruru $ 150, onye Mgbasa ozi na ADSDAQ nwere ike idobe onodu a ma kwuo ugwo. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọnweghị onye na-ata arụ, enwere m ike igosipụta mgbasa ozi ọzọ ebe ahụ. Ezigbo ọgụgụ isi. Ugbu a ị na-ekpebi ihe ala gị kwesịrị! Aga m abanye n'ime omimi a ma nwee olile anya n'ezie ịnwale ọnwa ndị na-abịanụ na ADSDAQ. Ihe kachasị mkpa bụ na achọghị m ịhapụ ndị m na-eji ugbu a!
Nkeji edemede na Yahoo! Azụmaahịa
Tags: mee ka ego onlinemonetizationego
Daalụ maka isi - naanị gaa na ya wee banye. M ka na-agbanwe agbanwe banyere otu m ga-esi mezuo ego m niile na saịtị m niile… nke a nwere ike ịba ezigbo uru.
JT- oru Rubicon
Douglas– ekele maka post! Enwere m ọrụ maka mmemme onye nkwusa na Rubicon Project. Enwere m obi ụtọ ịnụ banyere ahụmịhe ọma gị na mmemme anyị. Ndị otu anyị na-arụsi ọrụ ike iji nyere ndị mbipụta aka dịka ị na-enweta ego site na mgbasa ozi na saịtị gị ka ị na-arụ obere ọrụ.
Kpamkpam debe anyị na nzaghachi gị.
Daalụ maka ịkwụsị site, JT.
Rubicon adịghị arụ ọrụ nke ọma na ADSDAQ ya mere m ga-adọpụ usoro ahụ. Mgbasa ozi ahụ gosipụtara ma ọ dịghị clicks pụtara ịdebanye aha na Rubicon. Anyị enweghị ike inwe nke ahụ! Echere m na m gaara 'faked' ya site na ijere ibe ahụ ozi site na iframe, mana nke ahụ bụ ntakịrị mbanye anataghị ikike.
Akwụsịrị m akwụkwọ iji kwado n'abalị a. Kudos ọzọ na ọrụ ndị ahịa gị - unu dị ịtụnanya.
Ọ bụ n'ezie ụzọ dị mma iji tinye post a ịkọrọ anyị. Ngwaahịa ahụ dị oke mma ịbụ eziokwu ma enwere m olileanya na ọtụtụ ndị ga-edebanye aha ya.
Maka m, m ga-eme ya n'oge na-adịghị anya.